1.Ewepu ihe na-esi isi site na ncha akwa n’ime ụlọ !!
2.Cewepu ebu na mkpopu site na igwe eji sachaa akwa !! (Mgbe izu 2-3 nke iji ụbọchị kwa ụbọchị)
3.Removes grime si na drainage sooks !!
4. Enwere ike iji ihe karịrị 300 ugboro (ihe dị ka otu afọ).
5. Wepu magnesium site na net mgbe oge 300 ma jiri ya n’ubi ma obu nkpuru osisi.
Jiri: Ejiri dị ka ngwaahịa inyeaka maka deodorizing, nhicha na ịcha akwa akwa nke owu, linen na akwa sịntetik.
Ihe nkpuchi a site na iji profaịlụ aluminom di elu di elu, adighi aru ncha, ikpo oku na-acho uzo di elu.megharia okpukpu etiti, nye ezigbo nkwado.
Ogbo foaming axillary na okwukwe aka, ka iji bụ ihe ọma, pụrụ iche a haziri nke anwụrụ, nye mma mma ibu, tube na roba sooks na-ezere ndị metal esemokwu mbenata esemokwu na ụda nkuzi mgbamejije.
Antiskid roba cushions, na-enye ezi ala esemokwu ike, n'ime Tibet metal gasket, ike ha anwụ ngwa ngwa, nwere ike mgbanwe elu, adabara dị iche iche elu.